Ikhtiyaarrada Barnaamijka Daaweynta Ku-daweynta Khamaarka - Koodhadhka Lacag-bixinta ee Khadka Tooska ah
Barnaamijka Ikhtiyaaraadka Barnaamijka Daaweynta Khamaarka
Posted on August 14, 2020 August 14, 2020 author Andrew	Comments Off ee Kala Ikhtiyaariga Barnaamijka Xulashada Barnaamijka Balwadda Khamaarka
Khamaaristu waxay u noqon kartaa waxqabad hal mar-in-halka-hawl ama, in yar oo nasiib badan, hab lagu guuleysto in Ghanna dhalanteed ah. Nasiib darrose, khamaarayaashu waxay noqon karaan kuwo waswaassan oo qasab ku ah inay ku ciyaaraan tuugta ama soo jiidaan burcadda hal-hubaysan. Waxaa laga yaabaa inay is arkaan iyaga oo ku jira darxumo maandooriye oo iyaga u burburin kara dhaqaale ahaan, bulsho ahaan, cilmi-nafsi ahaan ama xitaa jir ahaan.
Ururka Ciyaaraha Mareykanka wuxuu ku qiyaasayaa in boqolkiiba 1 boqolkiiba dadka Mareykanku ay noqon karaan qamaara cuduro ku dhaca. Haddii aad isku aragto xaaladan dhibaatada leh, waxaa jira xulashooyinka barnaamijka daaweynta qabatinka khamaarka oo isbadal ku sameyn kara noloshaada. Waxaan halkaan u nimid inaan ku caawino oo aan ku taageerno intaad u socoto safarkaaga muhiimka ah ee aad ugu soo noqonayso nolosha qabatinka aan lahayn na soo wac 24/7 maanta si aan u bilaabo.
Maxaa Sababa Balwadaha Khamaarka?
Maandooriyeyaasha, iyadoon loo eegin walaxda ama ficilka, dhammaantood waxay ka helaan asalkoodu cilmu-nafsiga. Marka, maxaa sababa balwadaha khamaarka? In kasta oo dad badani bilaabi karaan inay wax qabsadaan ama wax caado u qaataan, haddana balwadu waxay samaysantaa marka qofkaasi noqdo qof ku tiirsan cilmu-nafsi ahaan. Si fudud haddii loo dhigo, balwadu waa markaad si fudud u joojin karin inaad wax ku doorto kaligaa maxaa yeelay waxaad u baahan tahay sare, natiijada ugu dambeysa ama fulinteeda. Khamaarayaasha Anonymous ayaa sharxaya in khamaarayaasha ay inta badan dareemaan inay xakameyn karaan howlahooda halka khamaarayaasha qasabka ah ay iyagu dhab ahaan iyagu maamulaan. Intaani waa hubaal: In kasta oo aanu qofna dooran inuu yeesho balwad, haddana waxaa muhiim ah in la doorto goorta laga xoroobayo qabashadiisa.
Haddii aad balwad ku yeelato khamaarka, noloshaada oo dhan saameyn ayey ku yeelan kartaa. Waxaad la kulmi kartaa burbur dhaqaale, luminta gurigaaga ama meheraddaada deyn khamaar ah awgood, dhammaadka guurka ama luminta haysashada ilmaha, ama hoos u dhacaaga ayaa kuu horseedi kara balwado dheeraad ah iyo xanuuno nafsi ah. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in la aqoonsado dhibaatada sida ugu dhaqsaha badan, markaa waxaad ka heli kartaa caawimaad daweynta daroogada khamaarka.
Intaas waxaa sii dheer, way ka fududdahay sidii hore inaad khamaariiste noqoto maanta. Kasiinooyinka ayaa ku soo badanaya gobollo aad iyo aad u tiro badan, waxaana diyaar u ah marin badan oo ka mid ah goobaha lagu ciyaaro ee khadka tooska ah laga helo. Ha u oggolaan marinkaaga fudud inuu kuu horseedo adiga ama kuwa aad jeceshahay inaad hoos ugu dhaadhacdo quusta. Taabadalkeed, na soo wac maanta si aad wax badan uga ogaato daaweynta, xarumaha iyo kooxaha kuu dhow. Waxaan diyaar u nahay waqti kasta oo aad wacdo.
Ma Jirtaa dawo loo helo khamaarista?
Cudurrada nafsaaniga ah, sida cilladda qasabka ah ee qasabka ah ama cunno-xumada, ma laha barta ugu dambeysa ee lagu caddeeyo inay bogsadeen. Gamblers Anonymous, xubnuhu waxay ku ogaadaan inay tani run tahay jirradooda sidoo kale. Khamaar daawo ma leeyahay? Maya. Laakiin sida balwadaha kaleba, talaabooyin ayaa loo qaadi karaa si loo jebiyo khamaarka haysa noloshaada ama nolosha kuwa aad jeceshahay. Haddii aad khamaarato waqtiga oo dhan oo aadan joojin karin ama aad ku sii socon karto waxyaabo fara badan oo faraha ka baxa, markii la raadsanayey caawimaadda waa hadda.
Daaweynta khamaarayaasha waxay ka shaqeysaa gamut ka daaweynta culus ilaa soo kabashada ku saleysan kooxda. Barnaamijyada daaweynta qabatinka khamaarka maaha soo jeedin hal-cabbir ah; halkii, waxaad u baahan tahay inaad naftaada wax ku barato fursadaha aad heli karto adiga iyo qoyskaaga, si aad u gaarto go'aanka saxda ah ee horseedaya natiijada ugu wanaagsan ee qof walba oo ku lug leh.
Daaweynta Daaweynta Habdhaqanka Garashada
Kulamada daaweynta habdhaqanka-daaweynta ee garashada ayaa muujisay natiijooyin rajo leh wajiga noocyada balwadaha kala duwan, oo ay ku jiraan khamaarka. Daaweyntan, xirfadlaha caafimaadka dhimirka wuxuu ka caawin karaa qofka balwada leh inuu aqoonsado geedi socodka fikirka ee horseeday dhaqanka khamaarka qasabka ah. Tusaale ahaan, khamaarayaal badan ayaa rumeysta in haddii ay sii wadaan dhigista sharad muddo dheer, in ay hubaal ku guuleysan doonaan bakhaarka weyn ee ay ceyrsanayeen. Halkii riyada hodantinimada, khamaarayaasha kale way ku sii nagaan doonaan, iyagoo rajeynaya in guuleystayaasha dambe ay bixin doonaan deymihii ay horey u lahaayeen.
Sababtoo ah dabeecadda nafsiyeed ee balwadda khamaarka, niyadda khamaarahu waxay u imaan kartaa inay ku tiirsanaato gabi ahaanba jaakbotyada iyo hoos u dhaca luminta qulqulka. Daaweynta akhlaaqda garashada, khamaariistu wuxuu bilaabi karaa inuu aqoonsado fikradahaas khaldan kana shaqeeyo inuu saxo. Markii sababahaas aasaasiga ah la aqoonsado oo wax laga qabto, adiga ama qofka aad jeceshahay waxaad bilaabi kartaa waddada soo kabashada.
Hababka Kale ee Daaweynta
Fursadaha barnaamijka daaweynta qabatinka khamaarka waxaa ka mid ah habab kale oo daaweyn ah sidoo kale. Daaweynta cilminafsiga, ama dhaqanka wax ka qabashada waxyaabaha khamaarka keena iyada oo loo marayo kal-fadhiyo la-talin shaqsiyeed iyo kooxeed, waxay u horseedi kartaa natiijooyin badan oo isku mid ah sida daaweynta dabeecadda garashada, oo ay ku jiraan go'doominta sababaha iyo ka noqoshada fikradaha qaldan.
Daaweynta qoysku sidoo kale waxay faa'iido u yeelan kartaa khamaariistaha balwadda leh. Markaad si khasab ah u khamaarto, waxay u badan tahay in qoyskaaga sidoo kale la saameeyo. Daaweynta qoysku ma aha oo kaliya arrinta khamaarka lafteeda laakiin sidoo kale waxay ka hadlaysaa bogsashada xiriirka qoyska iyo horay u socoshada wadada soo kabashada si wada jir ah.
Qayb muhiim ah oo ka mid ah daaweynta khamaarka ayaa sidoo kale noqon karta xaddidaadda helitaanka fursadaha khamaarka. Tani way adkaan kartaa; dad badani iskama ilaalin karaan soo-gaadhista xafiiska barkadda Super Bowl ama xayeysiiska khamaarka ee ka muuqda internetka oo dhan. Laakiin ugu yaraan xaddidida marinka waddooyinka ugu cad uguna macquulsan ee la heli karo, balwadda khamaarka wuxuu bilaabi karaa inuu diiradda saaro dabeecadooda qasabka ah ama qasabka ah, halkii uu kula tacaali lahaa oo keliya ka-hortagga.
Xarumaha Daaweynta Maandooriyaha Khamaarka Bukaanka Degaanka
Haddii adiga ama qofka aad jeceshahay aad qabatimay khamaarka isla markaana balwaddaasi ay horseeday xulashooyinka iyo natiijooyinka nolosha ee liita ee sii xumaanaya, xarumaha daaweynta balwadda khamaarka la dego ama la dhigo ayaa laga yaabaa inay yihiin xulashada ugu wanaagsan ee soo kabashadaada.
Faa'iidooyinka Daaweynta Khamaarka Degaanka
Faa'iidooyinka daaweynta khamaarka deganaanshuhu way ka sii fogaan karaan daryeelka bukaan-socodka si fudud maxaa yeelay bukaanku waxay halkaas u joogaan inay diirada saaraan ka-soo-kabashada iyadoon lahayn buuqa nolol-maalmeedka. Golaha Qaranka ee Khamaarka Dhibaatada wuxuu tiriyaa faa'iidooyinkaan:
Barnaamijyo lagu daaweynayo arrimaha nafsaaniga ah iyo habdhaqanka
Daaweyn isku mid ah oo loogu talagalay dhibaatooyinka la xiriira
Kormeerka caafimaadka iyo maskaxda
Xarumaha Khamaarka Khamaarka
Ciyaartooyda sare waa halyeeyga goobta khamaarka, waxayna la kulmaan arrimo la mid ah balwadaha sida khamaarayaasha dinaagga ah. Farqiga u dhexeeya, dabcan, waa awood u lahaanshaha liiska dheeraadka ah ee xulashooyinka marka lagu daro bixinta daaweynta dhaqameed. Tusaale ahaan, tas-hiilaadka qabatinka khamaarka raaxada leh waxaa laga yaabaa inay bixiyaan adeegyo la mid ah kuwa lagu raaxeysto oo ay ku jiraan duugista, barkadda iyo helitaanka tubbada kulul, iyo goob aad u wanaagsan. Ugu dambeyntiina, kuwa balwadda leh ee khamaarka qabta waxay helaan noocyo isku mid ah oo daaweyn nafsi ah sida dadka kale oo dhan; waxay ku sameeyaan oo keliya goob u dhiganta goobta raaxada marka loo eego xarunta cisbitaalka.
Hal faa iido oo laga helo xarumaha kale ee tas-hiilaadka qabatinka khamaarka ee raaxada leh, si kastaba ha noqotee, waa kordhinta marin u helka xirfadlayaasha caafimaadka iyo caafimaadka maskaxda. Dadka awooda in ay bixiyaan wax intaa ka badan ayaa sidoo kale la arki karaa inbadan, tanina waxay u horseedi kartaa soo kabasho dhaqso ah mararka qaarkood.
Barnaamijyada Balwadaha Khamaarka
Barnaamijyada qabatinka khamaarka ee fulinta waxaa loogu talagalay xirfadleyda mashquulka badan ee aqoonsada inay tahay waqtigii isbeddel lagu sameyn lahaa qaababkooda burburin, laakiin aan si fudud awood u lahayn inay waqti dheeri ah ku lumiyaan deegaanadooda shaqada. Xirfadlayaashan, kuwaas oo, sida kuwa rollers-ka ah, waxay u badan tahay inay awoodaan inay lacag badan ku bixiyaan daaweyntooda, waxaa laga yaabaa inay helaan barnaamijyo la soo gaabiyey, sida barnaamijyada usbuuca oo keliya. Barnaamijyada waxaa laga yaabaa in si kale loo habeeyo si loogu daaweeyo balwaddooda iyadoo loo oggolaanayo inay ka qaybgalaan arrimaha maalinlaha ah ee danahooda ganacsi ee fulinta.
Barnaamijyada Daaweynta Khamaarka Bukaan-socodka iyo Daaweynta
Dib-u-dhaqan celinta khamaarka bukaan-socodka iyo barnaamijyada daaweynta waxay ka koobnaan karaan kooxaha sida Gamblers Anonymous ilaa goobaha kooxda ee kormeera ilaa daaweynta shaqsiga sii socota. Inta badan waxa lagu sameyn karo bukaan-jiifka ayaa sidoo kale lagu sameyn karaa goobta bukaan-socodka. Farqiga u dhexeeya barnaamijyada daaweynta bukaan-jiifka iyo bukaan-socodka waa asal ahaan muddada dheer ee daaweynta. Qaar badan oo ka mid ah qorshayaasha daaweynta bukaan-jiifka waxaa ka mid ah daaweynta bukaan-socodka socda ka dib sii deynta bukaanka. Golaha Qaranka ee Dhibaatada Khamaarka wuxuu soo jeedinayaa adeegsiga shuruudaha soo socda si loo helo barnaamijka daaweynta khamaarka saxda ah ee adiga ama qofka aad jeceshahay:
Xarun la aqoonsan yahay oo leh shaqaale tababaran oo shati leh
Barnaamijyada loo habeeyay baahiyaha qabatinka khamaarka
Shaqaalaynta la-taliyaha khamaarka oo sharciyeysan
Mid ka mid ah borotokoolka soo kabashada ee khamaarka bukaan-socodka ee ugu caansan waxaa fududeeyay Gamblers Anonymous oo ku saleysan barnaamij 12-tallaabo ah oo la mid ah kii ay isticmaaleen Alcoholics Anonymous iyo Narcotics Anonymous. Gamblers Anonymous wuxuu la shaqeeyaa dadka balwada leh ee qiraya dhibaatadooda oo doonaya inay wax ka beddelaan maaddaama ay sidoo kale ka shaqeeyaan inay ka soo kabtaan khamaarka. Ururka, kaas oo ilaaliya dhammaan macluumaadka lagu wadaago goobaha qarsoodiga ah ee kulanka, wuxuu ka shaqeeyaa inuu keeno khamaarayaasha dhowaan la ogolaaday meel ay ku sii wadan karaan noloshooda, u celin karaan cid kasta oo waxyeelo ka soo gaadhay khamaarkooda oo hadhowna lataliye u noqda kuwa kale kuwaas oo ku socda isla wadadaas.
Haddii adiga ama qof aad jeceshahay aad ogaatay balwad khamaarka, waxaan kaa caawin karnaa inaad hesho kulamada Gamblers Anonymous, goobaha bukaan-jiifka ama barnaamijyada bukaan-socodka. Wac maanta si aad u jebiso silsiladaha khamaarka noloshaada oo aad u bilowdo ka shaqeynta xagga miyir-qabka. Waxaan tababarnay shaqaale la heli karo 24/7 si ay kaaga caawiyaan baahiyahaaga marka aad soo wacdo.
Daawooyinka laguu qoro iyo Daawooyinka Miisaanka La Dhigo
Daawaynta mararka qaarkood waxay noqon kartaa qayb qiimo leh oo ka mid ah borotokoolka soo kabashada ee dheeriga ah. Haddii adiga ama qof ka mid ah qoyskaaga uu khamaar ku khasbo qasab, taxaddar oo isticmaal kaliya daawooyinka loo qoray ama lagula taliyay xirfadle aqoon leh. Markaad ku xakamayso hal qabatin, way fududahay inaad mid kale ku dhacdo adoo is daaweynaya. Si kastaba ha noqotee, daawooyinka uu kuu qoro oo uu kormeero dhaqtarkaaga ayaa kaa caawin kara soo kabashadaada guud.
Jaamacadda Minnesota ayaa soo gabagabeysay daraasad dhowr sano ka hor si ay u baarto saameynta xeeladaha daawooyinka noocaas ah. Kaqeybgalayaasheeda daraasadeed waxay udhaceen laba kooxood: kuwa xakameyn dhaqdhaaqeedu hooseeyo iyo kuwa kufsaday dabeecad qasab ah. Marka laga hadlayo khamaarayaasha qasabka ah, daawooyinka sida caadiga ah loogu isticmaalo qorshooyinka balwadda mukhaadaraadka, sida naltrexone, waxaa lagu ogaadey inay leeyihiin saameyn togan. Khamaarayaasha leh xakamaynta kicinta hoose, daraasadda ayaa baartay walxaha saameeya kiliyaha hore ee maskaxda. Barnaamijkaaga daaweynta ee aad dooratay wuxuu kaa caawin karaa aqoonsiga xulashooyinka ugu fiican duruufahaaga.
Sida loo Helo Xarunta Daaweynta Maandooriyaha Khamaarka ee ugu Fiican
Helitaanka barnaamijka daaweynta khamaarka saxda ah ee adiga ama qofka aad jeceshahay waxay noqon kartaa hawl dheer. Waan caawin karnaa. Shaqaalaheennu waxay awood u leeyihiin inay kaala hadlaan xaaladdaada gaarka ah waxayna kaa caawinayaan inaad aqoonsato barnaamij ama xulasho daaweyn oo adiga iyo qoyskaaga ka caawin kara inaad ka baxsataan mukhaadaraadka khamaarka. Marka, maanta nagala soo hadal, kala hadal xulashooyinkaaga mid ka mid ah la taliyayaashayada aqoonta leh, oo bilow safarka dib ugu noqoshada nolol qabatin la'aan ah.
Kuuboonnada maskaxda ayaa halkan jooga:
1 Maxaa Sababa Balwadaha Khamaarka?
2 Ma Jirtaa dawo loo helo khamaarista?
3 Daaweynta Khamaarayaasha
4 Daaweynta Daaweynta Habdhaqanka Garashada
5 Hababka Kale ee Daaweynta
6 Xarumaha Daaweynta Maandooriyaha Khamaarka Bukaanka Degaanka
7 Faa'iidooyinka Daaweynta Khamaarka Degaanka
8 Xarumaha Khamaarka Khamaarka
9 Barnaamijyada Balwadaha Khamaarka
10 Barnaamijyada Daaweynta Khamaarka Bukaan-socodka iyo Daaweynta
11 Daawooyinka laguu qoro iyo Daawooyinka Miisaanka La Dhigo
12 Sida loo Helo Xarunta Daaweynta Maandooriyaha Khamaarka ee ugu Fiican
13 Kuuboonnada maskaxda ayaa halkan jooga: